Ogaden News Agency (ONA) – Faallo : Kuwa inoo Muuqda Waxay Jilayaan Riwaayad Loo Alifay – Xuseen Noor
Faallo : Kuwa inoo Muuqda Waxay Jilayaan Riwaayad Loo Alifay – Xuseen Noor
Posted by ONA Admin	/ May 12, 2017
Marka la daawado riwaayad ama filim aad u xiisa badan, daawadayaasha waxay sacabka u tumayaan aadna u qadarinayaan jilaha filimka ama riwaayadda, iyagoo ogsoon in jilaagan uu matalayo hadday tahay odhaah iyo hadday tahay ficilba wax loo qoray oo loo sheegay goorta iyo habka uu u dhahayo ama u jilayo. Waxay daawadayaasha qiimeeyaan qofka hoortooda ka muuqda ee sida fiican uga qosolsiiyay ama ugu soo bandhigay filimka iyo riwaayada. Taasoo jirtana hadana ma mooga daawadayaasha in waxkastoo la jilayo, hadday tahay riwaayad, filim ama hees lagu luuqaynayo uu jiro qoraa ama abwaan soo alifay, mid isku soo dubariday (producer/director) ama muusiqada saaray. Qofkan jilaya wuu garanayaa kamana hor iman karo abwaanadaa usoo alifay riwaayada, filimka ama heesta. Haduu iscajabiyo oo diido inuu fuliyo habkay doonayaan inuu u jilo riwaayadda/filimka ama u qaado heesta, si sahlan ayay saaxada uga saarayaan. Intaa adigoo maskaxda ku haysta waxaad dib u milicsataa isbadaladii hab dhaqanka gumaysiga Itobiya uusoo maray.
Nidaamka gumaysi ee Itobiya wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo ku dambeeyay inuu qaato falsafada gumaysi ee dawladihii Yurub. Laga soo bilaabo isfidintii Minilik ilaa xukunkii Dargiga ee Mengisto, gumaysiga Itobiya wuxuu aaminsanaa in dalka Ogadenya yahay gobol ka mid ah Itobiya, dadka dagan oo xoola dhaqato ree guuraa ahna ay yihiin qabiilo Somaliyeed oo labada xad u kala goosha oon ku lahayn dalka ay dagan yihiin wax xuquuq ah oo dhaafsan daaqsinta. Sidaa darteed, difaaca Ogadenya waa masuuliyadda ciidanka Itobiya. Shaqaalaha ka shaqaynaya meheradaha xukuumadda waa inay noqdaan dad laga keenay dalkooda (Itobiya) iyo in yar oo shacabka Ogadenya laga soo xulay oo dhaqan iyo afba iyagaa la mid noqday. Nidaamkan oo loo yaqaano Gumaysiga Qayaxan ama Xukunka Tooska ah (Direct Rule) ee xukuumadihii Amxaarada ay qaateen, waxaa lagu fuliyaa xoog ciidan iyo dadweyne lasoo dajiyay oo burburiya kacdoonada shacabkii dalka lahaa.
Sidaan la socono, jabhada Tigreega ee TPLF waxaa loo asaasay inay ka xoreeyaan shacabka Tigree xukunkii tooska ahaa ee Amxaarada, sida ka muuqata magacooda ah; Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigree (Tigre People’s Liberation Front TPLF). Hasa ahaatee markay la wareegeen xukunkii Itobiya, waxay dhaxleen fikradii Amxaarada,waxayna go’aansadeen in si Toos ah loo gumaysto shucuubtii horey loo gumaysan jiray oo nidaamkii xukunka ee tooska ahaa (Direct rule) aan waxba laga badalin. Laba sano (1991 – 1993) oy kusii jeedeen inay si fiican uga adkaadaan Amxaarada iyo Oromad markay u dhamaatay, ayay maleesiyadii TPLF ee (Ihadhig) oo lasoo qalabeeyey, tababar militarina soo qaatay kusoo ururiyeen Ogadenya. Hadaan soo koobo taaiikhdaa oo aad looga dharagsan yahay, fikradii ay dhaxleen ee ahayd inay dalka Ogadenya ku xukumaan maleesiyada Ihaadhig waxaa fashiliyay N/hurayaasha CWXO. Waxaa halkaa kusoo afjarantay taariikhdii ku dhisnayd xoog ku maquunintii iyo isla weynidii Itobiya ee soo taxnayd tan iyo is-balaadhintii Menilik. Taariikh cusub oo aan horay u soo marin Ogadenya ayaa bilaabatay oo ku dhisan in Ogadenya laga xukumo daaha gadaashiisa (Indirect rule).
Sidaan kusoo tilmaanay qoraalka qaybtiisa horena, riwaayad uu gumaysiga soo alifo ayaa kolba loosoo dhiibayaa koox jilaysa. Dadweynaha caadiga ahna kuwaas hortooda ka muuqda oo ina hebel iyo ina hebel ah oy garanayaan ayay sacabka u tumayaan ama habaarayaan.
Qaybta kale ayaan kaga hadli doonaa riwaaadaha Gumaysiga soo alifo iyo habka loo jilo.